dailynews.blaogy | Ny fiainana kristiana
Categorie: Ny fiainana kristiana
Ny vavaka izay mazava ho azy fa resaka hifanaovana @ Atra dia zava dehibe indrindra eo amin ny fianana kristiana satria dia azo lazaina fa io no ain ny ny fianana kristiana iray noho ny fifaneraserany @ Atra. Ny kristiana mivavaka no zavatra atahoran ny devoly indrindra satria...
Fantatrao Ve Izy? ( S.M Lockridge)
Ny baiboly dia milaza fa toetra fito no maha Mpanjaka ny mpanjakako… mpanjakan ny jiosy Izy; mpanjaka @ alalan ny fihaviana izany… Mpanjakan Israely Izy; mpanjaka @ alalan ny firenena izany… Mpanjakan ny fahamarinana Izy...
Te Hahazo Valimbavaka Ve Aho? Inona No Tokony Ho Fantatro
1)Mila marina eo anatrehan Atra satria tsy ny olona rehetra no valiany vavaka: Fanina ny olona matetika hoe maninona no tsy mety mahita valimbavaka mihitsy ary maninona no tsy mihaino Atra nefa izy mba mivavaka ihany. Toa mivavaka ihany, toa mitomany ihany, toa misentosento ihany anefa...
Fomba Pratika Hahazoana Ny Atao Hoe Finoana
Inona no atao hoe finoana? Hebreo 11: 1=> ny finoana no fahatokisana ny @ zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny tsotra indrindra hahazoako ny atao hoe finoana an Atra dia Mino fa misy Izy ary mino izay lazainy ao anaty baiboly....